Yuusuf Garaad Cumar: “Aniguba mar baan dhacay” - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Yuusuf Garaad Cumar: “Aniguba mar baan dhacay”
Dow ma aha in aan xukun ku saleysan mala awaal aan ku rido, ama aan canaan kala dul dhaco mid ka mid ah dhinacyada faraha badan, ee toos ama si dadban u yeelan kara mas’uuliyadda mar fashilka ah.
Mustaqbalkaagu kuma xirna hal mar oo aad natiijada imtixaanka ku hungowday, sabab kasta ha keentee.
Inkasta oo guusha lafteedu ay u baahan tahay maareyn, guul darrada ayaa ah midda sida loo maareeyaa ay dad kala reebto.
Gaabis ama guul darro in aad ka kabataa waxay u baahan tahay geesi ama adkeysi, kalsooni aad isku qabto, awood maskaxeed iyo mid wax qabad. Iyo in aad leedahay bartilmaameed aad higsaneyso.
Dadka guul darro la kulma, qof wuxuu dhex degaa guul darrada oo uu hooy ka yeeshaa. Xanuunkeeda ayaa ka adkaada. Wuxuu galaa meer-meerto murugo ah oo uu hoos u sii tiimbado ilaa ay aakhirka la degto.
Dhicitaan, ka-kabasho iyo waliba in iskuulka laga gaaro libin aan la haweysan karin dhacitaanka ka hor, tusaale nool aniga ayaa u ah.
Waa tan sheekadeydu.
Cirku in uu igu soo dumay ayaan mooday. Waxay iila mid ahayd fashilka ugu weyn adduunka. Runtiina way ahayd fashilkii ugu weynaa adduunkeygii maalintaas. Xataa ma hubin in aan abid ka soo waaqsan doono.
Wax aan yeelo ma aqaan. Waxa sidaan xigi doonana ma qiyaasi karo. Talo faraheyga way ka baxday.
Waalidkeey ayaa markiiba la igu soo rogay nidaam hor leh oo xakameynaya xorriyaddeyda.
Dishibiliin adag ayaa la ii yeelay; wakhtiga dugsiga quraanka, xilliga aqoon barashada guriga, xilliga cayaaraha iyo dabaasha, xilliga nasashada iyo xilliga hurdada.
Waalidkeey wuxuu ii muujiyay in aan wax hore la ii haysan oo ay igu jecel yahay sideyda, hase yeeshee, hadda iyo ka dib la ila xisaabtami doono, gacanna la i siin doono.
Saddex Imtixaan ayaa sannad kasta la fariisan jiray. Fasal kasta marka aad ka gudubtana shahaaddo ayaa la bixin jiray sida jaldiga buugga u adag. Shahaaddada aan ka qaatay Fasalka labaad ee Dugsiga Hoose midabkeedu casaan xigeen ayuu ahaa.
Shahaaddada Fasalka labaad waxaan keydinayay ilaa aan Dugsiga Sare dhammeystay. Waxay horseed iigu noqotay khibrad aan marar badan ka shidaal qaatay oo dhaqan ii noqotay. Waa in sannad kasta hal ama dhowr maaddo aan ugu sarreeyo fasalka ama iskuulka oo dhan. Ama in aan maddooyinka oo dhan marka la isku daro dhibcahooda aan anigu kuwa ugu badan haysto.
Ardaydii aan wejiga ka dadbi jiray sannadkii aan dhacay, waxaa beddeshay in aan ka mid noqdo kuwa kalsoonida ku qaba natiijadooda ee aan la gabban. Intii aan iskuul dhiganayay ugu yaraan saddex jeer ayaan xusuustaa oo Maamule uu igu casuumay in daabbuurka ama safka iskuulka aan soo istaago si aan ardayda ula hadlo.
Marka aan iskaa barbardhigo, waxaan aamminsanahay fursadda soo kabashada ee aad maanta haysataa in ay aad uga sarreyso middii aan haystay markii aan ku dhacay Fasalka Labaad ee Dugsiga Hoose.
Waxa xiga waa waxa hadda taagan oo aad wax ka qaban karto. Iyaga ayaana go’aaminaya mustaqbalkaaga.
The post Yuusuf Garaad Cumar: "Aniguba mar baan dhacay" first appeared on Caasimada Online.